Umphakathi ufuna kumiswe umphathi waseMpofana | Eyethu News
Umphakathi ufuna kumiswe umphathi waseMpofana
“Ikhansela lithi isimo asilawuleki kulomkhandlu.”
Umphakathi wase-Mooi River ovale umgwaqo
UVUTHA ungabaselwe umphakathi wase ndaweni yase Mpofana (Mooi River) njengoba ukhala ngobuholi balomkhandlu obusolwa ngokungazisukumeli izinkinga ezibhekene nawo.
Lomphakathi kuleli sonto ubuvale umgwaqo ongenela kwi lokishi lase Bruntville kuphinde kwaphazamiseka ukusebenza kulomasipala. NgoLwesibili bekufanele ngabe kubanjwe umhlangano wamakhansela kanye nezikhulu zomkhandlu kodwa lokhu kwabhutsha ngenxa yezinxushunxushu zombhidlango elokishini lase Bruntville. Ngokusho komthombo okhona kule ndawo unqabile ukuba adalule igama lawo uthe isimo asikho sihle kulomkhandlu njengoba usazikhotha amanxeba emva kokuba uthole izincomo ezingekho zinhle disclaimer kumcwaningi mabhuku, Auditor General.
Lezi zincomo bekungezonyaka wezimali u 2015/2016. U-AG waneka izinkinga kuphiko lwezimali kulo mkhandlu njengoba. Lomphakathi ufuna kukhonjwe indlela uMnuz Max Moyo abathi uyena ube nesandla ekutheni lomkhandlu uthole lombiko.
UMnuz Mthembeni Majola oyiKhansela le-IFP ukhombe inhlangano ye ANC ngokuhluleka ukulawula umkhandlu. “ Isimo asilawuleki kulomkhandlu. Emva kokuba sithole izincomo ezithusayo kumcwaningi sakubeka kwacaca ukuthi kufanele kube khona umhlangano wamakhansela ovalelekile ukuze sibone ukuthi simisa kanjani ngezinkinga ezikhungethe lomkhandlu,” kusho uMajola.
Uthe nakuba befuna lokhu kodwa amakhansela e-ANC ayishaya indiva lesi sicelo. “ Inkinga enkulu ukuthi kukhona uqhekeko oludla lubi khona ngaphakathi kwamakhansela e-ANC. Manje kuzolunga kanjani kumasipala,” kuchaza uMajobla
Amazwi ka Majola ananelwe uMnuz Nhlalayenza Ndlovu we DA obekhala esifanayo.
“ Sizokwenza kanjani lokhu uma isimo sinjena? Kufanele sibone ukuthi ikuphi esingakwenza ukuze isimo siguquke kulomkhandlu,” kusho uNdlovu
UMeya we dolobha uMnuz Xolani Duma walile ukuba aphefumule ngezinsolo zoqhekeko kumakhansela ka ANC, wathi isifunda se Moses Mabhida kwi ANC siphezu kwezindaba zezinkinga kulomasipala.
“ Manje besingeke ngeke siyinhlangano ka khongolose sihlanganyele hlanganyele namanye amakhansela akungasiwo awethu,” kusho uDuma
“Nginxusa umphakathi ukuba usibekezelele kuze kube isonto lapho ubuholi buzothula izethulo kumphakathi. Inkinga enkulu ukuthi lokhu kuba nomthelela ongemuhle njengoba abantu bagcine bengasakwazi ukuba baye emsebenzini kanti nezingane zigcine zingasakwazi ukuya esikoleni,” kusho Duma.
Uthi akahlangene nepolitiki umphathi wamasipala